Al-Shabaab oo weerar ka fulisay gudaha Kenya
Weerarkan ayaa dad xogogaal ah oo deegaanka ah ay noo sheegeen inuu ka dhacay deegaanka lagu magacaabo Shimbir Faatumo oo ku yaalla Koonfurta Mandera.
Mid ka mid ah mas’uuliyiinta gobolkaasi ayaa idaacadda VOA u sheegay in la aamisan yahay ugu yaraan laba qof oo rayid ah inay ku dhinteen weerarkan, ilaa saddex kalena ay ku dhaawacmeen.
Waxay Daily Nation sheegtay in ciidamo ka tirsan kuwa amniga ay ku baxeen goobta weerarku ka dhacay.
Gobolka Maanera waa kan ugu badan Waqooyi Bari Kenya ee ay ka dhacaan weerarrada Al-Shabab ay ka gaystaan waqooyi Bari Kenya.
Bishii May ee sannadkii hore weerar ay Al-Shabab ka gaysteen duleedka magaalada Ceel-Waaq dhinaca Kenya waxaa ku dhintay laba ka mid ah shaqaalaha qoda carro-kaawada.